၂၀၁၀ ကမ္ဘာဖလားဘော်လုံး ဖွင့်ပွဲ က ရှခီးလာ
Friday, June 11, 2010 11:47 PM | Posted by Unknown
၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဘော်လုံးဖလားပြိုင်ပွဲကို တောင်အာဖရိကမှာ ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဖွင့်ပွဲနေ့က တောင်အမေရိက တလွှားမှာ ကျော်ကြားလှတဲ့ အဆိုတော် ရှခီးလာက ၁၉၉၀ ခန့်က လူကြိုက်များလှတဲ့ Dance Like that သီချင်းကို ပြန်လည်သီဆို သွားပါတယ်။ သူမအရင်တုန်းက ဆိုထားသလောက်တော့မကောင်းဘူး။ တီးဝိုင်းကလည်းဆူညံနေတာကလွဲလို့ တေးသား မပေါ်လွင် လှပါဘူး။
Dance Like This (f/ Claudette Ortiz)
I ain't come to fight tonight .Too many ladies up in here tonight
(Everybody report to the dance floor please! Grabagirl!)
I never really knew that you could dance like this, She makes her man wanna speak Spani
Como se llama, Bonita? Mi casa, Su casa
The way you move, you've got me hypnotized . Especially when I look into his eyes
Hey Papi, I wanna see you do the dance to the conga
Hey girl, I can see your body movin' and it's driving me crazy
And I did not have the slightest idea until I saw you dancin'
The way you walk up on the dance floor
Noobody could ignore the way you move your body, girl And everything so unexpected the way you right and left it . So you could keep on digging it . Baila la baile de noche
Baila la baile ded, Baila la baile de noche , Baila la baile de d�a
Hey boy, now that I see your new rhythm , I'm inastate of shock now
The way I can see your body movin' , And I don't want you to stop now
I like the way you approach me so sensually , You got me inadaze, boy
I can't ignore the way you're dancin' , You got me inatrance and I can't explain it
Baila la baile de noche Baila la baile de d�a Baila la baile de noche Baila la baile de d�a
Senorita, feel the conga Let me see you move like you come from Havana
Ohhh, I didn't know you did it like that Hey, you Papi, don't you stop it
I wanna see you move your body Ohhh, I didn't know you did it like that
Baila la baile de noche Baila la baile de d�a Baila la baile de noche
Baila la baile de d�a Baila la baile de noche Baila la baile de d�a
Baila la baile de noche Baila la baile de d�a
တောင်အာဖရိက ၁ မက္ကဆီကို ၁
11:46 PM | Posted by Unknown
တောင်အာဖရိက ကမ္ဘာ့ဖလားဘော်လုံး ပြိုင်ပွဲ
မက္ကဆီကို နှင့် တောင်အာဖရိက တစ်ဂိုးစီဖြင့် သရေကျ
ယနေ့စတင်သည့် ၁၉ ကြိမ်မြောက် တောင်အာဖရိက ကမ္ဘာ့ဖလားဘော်လုံး ပြိုင်ပွဲ မှာ အိမ်ရှင် တောင်အာဖရိက နှင့် မက္ကဆီကို အသင်းတို့ ကွင်းဖွင့်ပွဲ အဖြစ်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာမှာ တစ်ဂိုးစီ ဖြင့်သရေကျ ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ရှင်တောင်အာဖရိကအသင်းက ဂိုးသွင်းခွင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သော်လည်း ဂိုးပေါက်နဲ့လွှဲချော်ခြင်း၊ ဂိုးတိုင်ထိခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် သရေဖြင့်သာအဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။
တောင်အာဖရိက က နောက်ဆုံး ၀င်လာတဲ့သတင်းတွေအရ တောင်အာဖရိက နိုင်ငံတွင် ယနေ့စတင် ကျင်းပသည့် ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တောင်အဖရိက ခေါင်းဆောင်ကြီး နယ်လ်ဆင် မင်ဒဲလားသည် ၎င်း၏ မြေးမလေး သေဆုံးသွားခဲ့မှုကြောင့် တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
Uruguay vs. France - Jun 11 2:30pm (ET) on ESPN
South Korea vs. Greece - Jun 12 7:30am (ET) on ESPN
Argentina vs. Nigeria - Jun 12 10:00am (ET) on ESPN
England vs. United States - Jun 12 2:30pm (ET) on ABC
Algeria vs. Slovenia - Jun 13 7:30am (ET) on ESPN
Serbia vs. Ghana - Jun 13 10:00am (ET) on ABC
Germany vs. Australia - Jun 13 2:30pm (ET) on ESPN
DMG ကုမဏီကိုအရေးယူနိင်အောင်ဆောင်ရွက်ကြ ပါစို့
11:45 PM | Posted by Unknown
ညီအကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဗိုလ်မှုးစိုင်းသိန်းဝင်းရဲ့ အင်တာဗျူးအရ နအဖ ကို နည်းပညာတွေ ကူညီနေတဲ့အထဲမှာ ဂျမဏီက ဒီအမ်ဂျီ ကုမဏီလည်းတခုအပါဝင်ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအမ်ဂျီ ကုမဏီဟာ အမေရိကန်၊ဥရောပနဲ့အာရှမှာလည်း ရုံးခွဲတွေရှိတယ်။ ဒီကုမဏီကို အရေးယူနိင်ဖို့ အတွက်
သံတမန်ရေးအရ အရေးယူနိင်အောင်၊ လူထုနည်းနဲ့ဒီရုံးရှေ့ မှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေဖေါ်ထုတ်ပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းနိုးဆော်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဂျာမဏီနဲ့ ဥရောပမှာရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ ဒီကုမဏီကိုအရေးယူနိင်အောင်ကြိုးပန်းကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ဒီကုမဏီရဲ့ အင်တာနက် ၀က်ဆိုက်ကိုဖေါ်ပြပေးလိုက်တယ်။
11:44 PM | Posted by Unknown
ဒါကကျနော်ရဲ့ စစ်ယူနီဖေါင်းဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီယူနီဖေါင်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရှေ့မှာ မ၀တ်ရဲ့တော့ဘူး။ သိပ်ရှက်နေပြီ။ ကျနော်တို့လို ညူကလီးယားထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် ကျောင်းသား တသောင်းကျော်လောက် ကပညာသင်ကြားနေတယ်။ ဒါက စစ်တပ်မျိုးဆက်သစ်တွေ ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့နအဖစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက ဘယ်တော့မှ အာဏာလွှဲပြောင်း ပေးမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ စစ်တ်ပမျိုးဆက်သစ်တွေကို လက်သပ်မွေးထားတာဖြစ်တယ်။ စစ်တပ်မှာ ထစ်ကနဲဆိုရှိရင် ပစ်သတ်ဆိုတဲ့ အမိန့်ကို ပေးထားတယ်။ နောက်မှဖြေရှင်းမယ်။ ဒါက စစ်တပ်ထဲ ပေးထားတဲ့ အတွင်းစကား အမိန့်ဖြစ်တယ်။
( ဒီမိုကရေစီစစ်သည်တော် သူရဲကောင်း-ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်း )